Inkonzo yokuphosa izixhobo - iAnebon Metal Products Co, Ltd.
Ukuphoswa kwe-Anebon Metal
Ukusuka kuyilo lokuqala ukuya kwindibano yemveliso, amaziko emveliso ka-Anebon anokubonelela abathengi ngamava okuma. Abasebenzi abaqeqeshiweyo nabanezakhono eziphezulu eziqulathe iinjineli kunye neengcali zokuqinisekisa umgangatho ezinokuthi zilungiselele iinkqubo ezahlukeneyo zemveliso ukuhlangabezana neemfuno ezithile zabathengi. izixhobo eziyimfuneko zokuyivelisa, ukusuka ekunyibilikeni ukuya kwiinkqubo zokugqiba ezinje ngoomatshini, i-anodizing, ukuwa, isanti, ukubekwa kwesanti, ukupeyinta kunye nokudibana）.
Uyilo lomngundo lelinye lamandla ethu. Ngelixa uqinisekisa uyilo kunye nomthengi, sikwathathela ingqalelo yonke imiba yoyilo lwesikhunta kubandakanya indlela isinyithi esiya kuhamba ngayo kwisixhobo, ukuze sivelise iinxalenye zejometri eziyimilo esondeleyo kwiimveliso zokugqibela.
Yintoni i-Die Casting?
Die eyahlulayo yinkqubo eyahlulayo yesinyithi ebonakaliswa kukusetyenziswa kwesisu sokubumba ukufaka uxinzelelo oluphezulu kwisinyithi esityhidiweyo. Ukubumba kuqhele ukwenziwa ngomatshini kwii-alloys zamandla aphezulu, ezinye zazo ziyafana nokubumba ngenaliti. Uninzi lokufa kokuphoswa ngaphandle kwentsimbi, okufana ne-zinc, ubhedu, i-aluminium, i-magnesium, ilothe, i-tin, kunye ne-lead-tin alloys kunye nezinye ii-alloys. Kuxhomekeka kuhlobo lokuphosa ufe, igumbi elibandayo lilahla umatshini wokukhupha okanye igumbi elishushu liza kufa umatshini ofunekayo.
Bephosa izixhobo kunye ngumngundo kuyabiza, ke inkqubo die eyahlulayo ngokubanzi kuphela kusetyenziswa ubunzima ukuvelisa inani elikhulu iimveliso. Kulula kakhulu ukuvelisa izinto ezilahliweyo, ezifuna amanyathelo amane kuphela, inyuselo yeendleko enye iphantsi. I-die casting ilungele ngokukodwa ukuveliswa kwenani elikhulu lokuphosa amancinci naphakathi, ngenxa yoko kufa ukulahlwa yeyona ndlela isetyenziswa kakhulu kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuphosa. Xa kuthelekiswa nobunye ubuchule bokuphosa, umphezulu wokuphosa ubusicaba kwaye unokuhambelana okuphezulu.
Sifuna ukwenza konke esinako ukukwenza dp ukukhusela okusingqongileyo. Njengenkampani yemveliso, sinoxanduva olukhethekileyo lokuthintela okusingqongileyo kungcoliseko.
Izibonelelo zokuBekwa kweLifa
Imveliso ye-castings iphezulu kakhulu, kwaye kukho iindawo ezimbalwa okanye akukho machining.
Izahlulo 2.Die-eyahlulayo yenza iindawo ixesha elide, dimensionally ezinzileyo nokuqaqambisa umgangatho kunye nenkangeleko.
Iindawo 3.Die-uphose womelele ngaphezu inaliti zeplastikhi iinxalenye otyhidiweyo ezibonelela ukuchaneka mbini efanayo.
4.Umbumbulu osetyenziswayo ekubunjweni kokufa unokuvelisa amawaka alahlekileyo afanayo ngaphakathi kokunyamezelwa okuchaziweyo ngaphambi kokuba kufuneke izixhobo ezongezelelweyo.
5.Zinc castings inokuchongwa ngokulula okanye igqitywe ngonyango oluncinci.
6.Umngxuma ekubunjweni kokufa kunokubanjiswa kwaye kwenziwe kubungakanani obufanelekileyo bokuzibamba.
7.Umsonto wangaphandle kwinxalenye unokufa ngokulula
Ukuphosa i-8 kungaphindaphinda uyilo lobunzima obahlukeneyo kunye nenqanaba leenkcukacha ngokuphindaphindiweyo.
9. Ngokubanzi, ukufa ukulahla kunciphisa iindleko ezivela kwinkqubo enye xa kuthelekiswa nenkqubo efuna amanyathelo ahlukeneyo emveliso. Ikwanokonga iindleko ngokunciphisa inkunkuma kunye nezinto ezilahliweyo.
Isinyithi ebesikade siyisebenzisa xa sisenza i-die casting ikakhulu ibandakanya i-zinc, ubhedu, i-aluminium, i-magnesium, ilothe, i-tin, kunye ne-lead-tin alloys njl.nangona intsimbi inqabile, inokwenzeka. Iimpawu zesinyithi ezahlukeneyo ngexesha lokuphosa kufa zezi zilandelayo:
• IzinkiIsinyithi esifa ngokulula kakhulu, esinoqoqosho xa kusenziwa izinto ezincinci, kulula ukuzinxiba, amandla aphezulu okucinezeleka, iplastikhi ephezulu, kunye nobomi obude bokuphosa.
• IAluminiyam: Umgangatho ophezulu, ukuvelisa okunzima kunye nokubhabha okubhityileyo okuzinzileyo, ukumelana nokubola okuphezulu, iipropathi ezilungileyo zoomatshini, ukuqhuba okuphezulu kobushushu kunye nokuqhutywa kombane, kunye namandla aphezulu kumaqondo obushushu aphezulu.
• Magnesium: Kulula kumatshini, amandla aphezulu ukuya kumyinge wobunzima, okona kukhanya kwezixhobo zesinyithi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
• Ubhedu: Yobulukhuni High kunye nokumelana olomeleleyo. Esona sinyithi siqhelekileyo sisetyenzisiweyo esine-die cast cast sineempawu ezifanelekileyo zoomatshini, anti-wear kunye namandla kufutshane nentsimbi.
• Ilothe kunye netoti: Ukuxinana okuphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu okuphezulu kwiindawo ezithile zokukhusela umhlwa. Ngezizathu zempilo yoluntu, le ngxubevange ayinakusetyenziswa njengendawo yokulungisa ukutya kunye nokugcinwa. I-lead-tin-bismuth alloys (ngamanye amaxesha ikwaqulathe ubhedu oluncinci) inokusetyenziselwa ukwenza unobumba ogqityiweyo ngesandla kunye nesitampu eshushu kushicilelo lweletterpress.